Malunga nathi-Quanzhou Tianli Co, Ltd.
IQuanzhou Tianli yoKhuseleko lweMveliso yokuKhiqiza Co, Ltd.(SSP) eyasekwa ngonyaka ka-2010, ikwisiXeko saseQuanzhou, eFengze esisityebi kakhulu ngoboya obunwele. Inkampani yethu ibalulekile ekwenzeni iimveliso ezikhuselayo zokuphefumla.
I-SSP ifanelekile izatifikethi ezithile zokwenza imaski yokuzikhusela yobungcali. Singomnye wabenzi bezinto ezimbalwa abaye bafumana izatifikethi ze-NIOSH N95. Kwaye kunye nezatifikethi ze-CE, iBenchmark, LA, QS, PM2.5 ileta egunyazisiweyo kunye nabanye abaninzi ngaxeshanye.
Kule minyaka yokutshekishwa kwezitshixo zeZiko leSizwe loKhuseleko lwezeMpilo emsebenzini (i-NIOSH), uLawulo ngokuBanzi lokuGcinwa kweMigangatho, ukuHlola kunye nokuQinisekiswa kweRiphabhlikhi yaseRiphabhlikhi yaseTshayina (AQSIQ), Umbutho wabathengi baseChina (CCA), iZiko likaMasipala waseShanghai (Ii-SMBQTS), iimveliso zethu ziqhuba kakuhle kuhlolo.
Phakathi kovavanyo lweemarike zeCCA ngokungalindelekanga kwimaski ye-Pm2.5 ngo-2015, imaski yethu engama-8285 iphumelele imbeko yokuphela kwemveliso yenkwenkwezi ephindwe kabini. Imaski yethu ekhuselayo ekhethekileyo kwi-brand ye-MASKin iyaziwa ngabathengi kwaye ifumana udumo oluhle nayo, ukwakha umfanekiso okumgangatho ophezulu engqondweni yemibutho yobungcali kunye nabathengi.
iimveliso eziphambili ziintlobo ngeentlobo zemaski ye-PPE kunye neemaski ezichasene ne-Pm2.5, ezinje ngemaski etyunjiweyo emile okomphezulu wokucoca, imaski yokufotokala ephezulu kunye nezinye izinto ezininzi kunye neentlobo ezahlukeneyo. Sinezinto ezinamandla ekuphandeni nasekuphuhlisweni kwemveliso kunye netekhnoloji kwaye ubukhulu becala senza iproduct processof ye-OEM kunye ne-ODM. Inkampani yethu ngumenzi we-OEM ezinye iimveliso ezaziwayo zelizwe zokuzikhusela kunye nomthengisi owahlukileyo weempawu ezintsha zekhaya eMask2.5 imaski.